Conway dia manao izay azony atao hanohanana ny #blacklivesmatter | Famoronana an-tserasera
Inona no azontsika lazaina fa tsy fantatsika ny fampiasana izay azo omena ireo logo. Noho izany inona nitsangana ny mpamorona ny The Punisher hitaky ny sary famantarana azy karandoha ho an'ny #blackslivesmatter.
Miresaka momba ny mpamorona ny The Punisher isika, ilay mpiambina izay niseho tamin'ny tantara an-tsary spiderman tamin'ny 1974, ary ny sariny na ny sary famantarana azy dia nampiasaina tamin'ny fotoana tsy fahita firy tamin'ny vondrona isan-karazany. Na dia tamin'ny ady Irak aza dia nampiasaina ho mariky ny miaramila amerikana tsy ofisialy.
Ny zavatra mahaliana amin'ity andro ity, ary efa izany fantatsika avy amin'ny tanan'i Banksy, io sarin-karandohany io ve nampiasain'ny polisy niditra manohitra ny hetsika #blacklivesmatter. Ka i Gerry Conway, mpamorona an'i Punisher, dia namorona fanentanana hamerina ny karandohany ho mariky ny fahamarinana ho an'ny #blackslivematter.
Raha ny marina, ny Nanafaka ny Skulls for Justice ny mpiara-namorona Punisher, fiara-miasa fiantrana T-shirt, miaraka amin'ny vola azo rehetra mankany #blacklivesmatter. Nanomboka ity fampielezan-kevitra ity rehefa nandefa hafatra tao amin'ny kaonty Twitter -ny i Conway izay nanentana ireo tanora mpanakanto hanome ny talentany amin'ilay tetikasa. Efa manana ny valiny izahay miaraka amina lobaka malaza misy sary famantarana manaitra sy tena izy.
Raha ny marina dia efa no fivarotana aiza no azonao vidio ny lobaka ho an'ny tombontsoa feno tongava amin'ny #blacklivesmatter. Ary ny zavatra tsara indrindra dia misy mpankafy maro mankasitraka fa miverina amin'ny habaka mahazatra azy, ny rariny fa tsy ny fomba nampiasana azy hatramin'izao.
Misy koa ny ady hevitra amin'ny fahafantarana fa ny saziny mihitsy olona somary maizina izy, araka ny lazain'ny sasany. Na izany aza, dia marika mifandraika amin'ny fahamarinana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Nanao ezaka ny mpamorona Punisher hamerina ny sary famantarana ny karandohany ho an'ny #blacklivesmatter